सरुभक्त, पेशल आचार्य, बिजु सुवेदी (विजय), रन्जना न्यौपाने, होम सुवेदी | मझेरी डट कम
सरुभक्त, पेशल आचार्य, बिजु सुवेदी (विजय), रन्जना न्यौपाने, होम सुवेदी
HomSuvedi — Fri, 10/18/2019 - 14:59
केही जर्खरिँदा सिलोक बटुली सन्जालमा फाल्नु छ
जस्मा भाव र दोषका छिँड परे भिक्षा लिई टाल्नु छ
ऐले वाचनको छ भव्य महिमा चाहिन्न सद् लेखन
खोजी आज यता छ एक भरिया जस्ले गरोस् वाचन ।।
Biju Subedi — Thu, 10/10/2019 - 19:45
राजा उत्तानपादले राज्य बढाएर अकण्टक बनाएका थिए । प्रजाहरू सबै सुखी थिए । उत्तानपाद आफ्नी रानी सुनीतिलाई एकदमै प्रेम गर्दथे । तर उनीहरूका सन्तान थिएनन् । त्यसले गर्दा राजाको वंश परम्पराका उत्तराधिकारी नभएकामा सम्पूर्ण प्रजाहरू दु:खी थिए । सबैले राजालाई दबाब दिन्दा पनि राजाले अर्को बिहे गर्न मानेका थिएनन् । राजगुरुले रानी सुनीतिलाई राजालाई बिहेका लागि दबाब दिन सुध्याए किनकि सुनीतिका कुरा राजाले टार्दैनथे तर सुनीतिको धेरै दबाबपछि पनि राजाले अर्को बिहे गर्न मानेनन् किनकि सुनीतिलाई पछि अन्याय भइजानेछ भन्ने उनलाई थाहा थियो ।
HomSuvedi — Mon, 10/07/2019 - 16:03
रारा घुम्ने निहुँ सँग यहाँ पार्वती बस्न आऊन्
भोले बाबा त्यसपछि यतै बस्न पाई रमाऊन्
चौतारीका डिलनिर बसी बाँसुरी यो बजाऊन्
कान्छाकान्छी मधुर लयमा प्रेमका गीत गाऊन् ।।
जेमराजलाई ओखतीका डोजले
HomSuvedi — Sat, 10/05/2019 - 10:41
जेमराजलाई ओखतीका डोजले डस्तै गर्नुपर्छ
जिन्दगी हो माथि चढ्दै तल खस्तै गर्नु पर्छ ।।
बाँचुञ्जेल सम्बन्धका सूत्र टुट्लान् भन्ने डरले
कैले काहीं कार्यालयै भित्र पस्तै गर्नुपर्छ ।।
editor — Sat, 10/05/2019 - 10:18
Biju Subedi — Sat, 09/28/2019 - 09:23
रात वित्याँस पर्छ पावेललाई, ऊ छटपटाउँछ, कोल्टे फेर्छ । समस्याले उसलाई सताउनै सक्दैन किनकि ऊ सुख र दुखःको पारि छ त्यसैले त ऊ वितरागी छ । बाबासँगको सङ्गतले उसलाई यस्तो बनाएका हो । तर समय समय हो । खोलोको बहाबजस्तै उसले कलकल, झरझर सङ्गिती देखे पनि महसुस गरे पनि उसले उज्यालो भेट्टाउँदैन । उसले सोच्छ दुःख त दुःखै हो । अरुले आफूभन्दा दुःखी हेरी दुःखी नबन भनेको सम्झेर कहिल्यै चित्त नबुझाउने ऊ, त्यसैले उसले यत्तिबेला चित्त बुझाएन ।
HomSuvedi — Fri, 09/27/2019 - 12:06
रह्यो तिन साँवै रह्यो ब्याज तिर्न
यता भोकभोकै उता छन् अजीर्ण
कतैबाट मागी कतै तिर्न खोज्दा
नसक्ने भएँ जिन्दगीबाट फिर्न ।।
सबै तिर्न पाए हुँदो हो हलुङ्गो
हलुङ्गो भए लाग्दथ्यो एक टुङ्गो
ऋणैभित्र डुब्दा छ छाती गरुङ्गो
मलाई भएको छ संसार ढुङ्गो ।।
HomSuvedi — Thu, 09/26/2019 - 17:58
व्यथाहरू लाखन लाख हुन्छन्
झन् आँसुमा लाख व्यथा चुहुन्छन्
बाँकी व्यथा भित्र कतै हियामा
बग्नै नपाएर यसै कुहुन्छन् ।।
हो जिन्दगी एक विशेष शिक्षा
यस्तै पढाएर दिएर दीक्षा
पिता तिमीले अघि नै प्रयाण
लियौ कसैको नगरी प्रतीक्षा ।।
editor — Tue, 09/24/2019 - 18:37
देख्नु र पाउनुमा अन्तर भेटेँ –मैले । सोच्नु र पुग्नुमा पार्थक्य पाएँ –मैले । ठान्नु र जान्नुमा पनि फासला देखेँ –मैले । भाग्दैभाग्दै र भोग्दैभोग्दै यतिखेर आएर सोच्दै छु । खे ! जीवनले के सिकायो ? अव्यवस्थित रूपले जे सिकायो त्यो स्वतःस्फूर्त सिकायो । अनुकरणमा नाममा सिकाए पनि । करण र कारणका उपमामा सिकाए पनि । आदेश र तामेलका नाममा सिकाए पनि । फैलिने र फैलाउने भावमा सिकाए पनि ।
ठुलो हुने भाव र ठालु पल्टिने ठाँट गिरीमा अनेकथरी स्थुल लक्षणाहरू पो सिकाएछ ।
HomSuvedi — Sun, 09/15/2019 - 18:51
आज र भोलि हामी एउटा मिठो अलङ्कारका लागि कोसिस गरौं यद्यपि यो अनिवार्य हैन । रुचि हुने मित्रहरुले यसमा पनि ध्यान दिनु उचितै हो ।
अलङ्कारको नामः विशेषोक्ति
परिभाषाः कवितामा कारण भएर पनि त्यसबाट कार्य नभएको वा विपरित प्रकृतिको कार्य भएको बुझिएमा विशेषोक्ति अलङ्कार हुन्छ ।
Biju Subedi — Fri, 09/06/2019 - 16:54
पृथ्वीमा उसले पृथ्वीबाट
केही गर्न सक्दैन
पृथ्वी बाहिरबाट गर्न उसले
कारण वषौँ भयो
उसले एकाङ्की विताएको
उसले व्रह्मा भनी मान्ने देवता
उनीहरुको शिवलिङ्ग रहेछ
उनीहरुको छाडा पिँजडा
उसको जनैको मन्त्र जप रहेछ
कमरेडहरु खोज्छ ऊ आहक्यूँ जसरी
टायँ टायँ फिस्स भयो
नेताले कमायो भन्छन्
सालासाली मोज गर्छ
विचरा नेता थाङ्ना मै
छाडा दुव्र्यवहार पनि
हरे राम नेतालाई नै
राम्रो काम गरे केही हुन्न
नराम्रो काम इसारा नगरे पनि
उसको अङ्गअङ्क चलेको मानी
सब हुर्मत हुन्छ
सुपर पावर जस्तो ऊ
न आफ्नो नाममा केही हुन्छ
न जनता उनका पक्षमा हुन्छ
विद्यापति स्मृति पर्व तथा पुस्तक विमोचन समारोह सम्पन्न
दुई मुक्तक (नेपाली गालामा फुल्नु पर्ने)
संरक्षण कविता आन्दोलन ०५५ को ५१ औ र ५२ औ शृंखलाका कार्यक्रमहरू सम्पन्न
चार मुक्तक (संस्कृतिको नाममा बिकृति)
सम्झनाका दुई फूल
चाँद हेरी रात आज व्यर्थै नै बिताए मैंले
हाँस्नु परे छ...........
मैले घर छोडेको धेरै साल भयो